International News Archives - ခေတ်သစ်နတ်ခ်
EU imposes heavy sanctions on Russia
EU imposes heavy sanctions on Russia The European Union (EU) has announced new broad sanctions on Russia. The European Union (EU) has announced new broad sanctions on Russia.
ရုရှားက ယူကရိန်းကိုဝင်တိုက်တဲ့အပေါ် မြန်မာစစ်ကောင်စီက ထောက်ခံပြောဆိုပါတယ်။ စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကို ဗွီအိုအေက သီးခြားဆက်သွယ်မေးမြန်းချိန်မှာ အခုလို ဖြေဆိုခဲ့တာပါ။ “နံပါတ် ၁ ကတော့ ဒီကိစ္စကတော့ ရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲစေဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့၊ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ နံပါတ် ၂ အနေနဲ့ကတော့ ရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းညှိထားတဲ့ ကမ္ဘာ့ချိန်ခွင်လျှာညီမျှရေးမှာ
ယူကရိန်း နေရာအနှံ့အပြားကို ရုရှားက ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်
ယူကရိန်း နေရာအနှံ့အပြားကို ရုရှားက ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက် ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရုရှားသမ္မတပူတင်က ယနေ့ ယူကရိန်းကို စစ်ကြေညာပြီးနောက် ယူကရိန်း နိုင်ငံ နေရာ အနှံ့ အပြားတွင် ပေါက်ကွဲသံများကြားရပြီး ရုရှားက ဒုံးများဖြင့် ပစ် ခတ်တိုက်ခိုက် နေကြောင်း နိုင်ငံတကာသတင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ယူကရိန်းအစိုးရကလည်း ရုရှားက ၎င်းတို့ကို ပစ်ခတ်
အင်္ဂလိပ်စာလက်ရေးကိုလူတိုင်းက ကျွမ်းကျင်စွာရေးသားနိုင်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်လက်ရေးအလှဆုံးသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံလိုက်ရသည့် ၈တန်းအရွယ်ကျောင်းသူလေး
လက်ရေးလက်သားကောင်းမွန်ခြင်းဆိုသည်မှာ ငယ်စဉ်အခါသူငယ်တန်းဘဝတည်းက စာရေးနည်းကိုစနစ်တကျဖြင့်ရေးတတ်ပြီးအခြေ ခံကောင်းဖို့များစွာလိုအပ်လှပါတယ်။ယနေ့အချိန်ထိကမ္ဘာကြီးဟာလည်း အင်္ဂလိပ်စာကိုနိုင်ငံတကာဘာသာစကားတစ်ခုအနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအင်္ဂလိပ်စာလက်ရေးကိုလူတိုင်းက ကျွမ်းကျင်စွာရေးသားနိုင်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာပါရဂူကြီးများကိုပင်ကျော်လွန်ပြီး ၈တန်းကျောင်းသူလေး ကကမ္ဘာပေါ်တွင်လက်ရေးအလှဆုံးသော လူသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ကောင်မလေးဟာနီပေါနိုင်ငံတွင် ၈တန်းသင်ကြားနေသောကျောင်းသူလေးတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးမလေး၏လက်ရေးဟာလည်း အမှန်တကယ်ပင်လှပလွန်းလှပြီး မြင်တွေ့သူများကပင်မချီးကျူးဘဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ စာဖတ်သူတို့အနေဖြင့်ရော မိမိကိုယ်ကိုလက်ရေးလှပါသည်ဟုယုံကြည်မှုရှိနေပြီး ၈တန်းကျောင်းသူလေး၏လက်ရေးနှင့်ယှဉ်နိုင်မည်ဟု ထင်မှတ်မိလားဆိုတာ ပြောပြခဲ့ပါဦး။Crd
အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေး စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ် ၀ဏ္ဏမောင်လွင်ကို မဖိတ်ဟု ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရ ထုတ်ပြန် ရန်ကုန်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရက စစ်ကောင်စီမှ ဝဏ္ဏ မောင်လွင် ကို ယခုလ ကျင်းပမည့် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အစည်း အဝေးသို့ ဖိတ်ကြားမည်မဟုတ်ကြောင်း တရားဝင် ထုတ်ပြန်ပြောဆိုသည်။ “အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက် အချက် ၅ ချက်ပါ သဘောတူညီချက်ကို
တရုတ်ကုလသမဂ္ဂမှ မြန်မာ့အကျပ်အတည်း ဖြေရှင်းရေး စစ်တပ် ၏ နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်မှု အခြေခံကို နားလည်သင့်ဟုပြော
မြန်မာပြည်သူကို သတ်ဖြတ်နေသော စစ်တပ်ကို ထိရောက် ပြင်းထန်သော ဖိအားပေးရန် ကုလသမဂ္ဂအကြီး အကဲ တောင်းဆို၊ မြန်မာ့အကျပ်အတည်း ဖြေရှင်းရေး စစ်တပ် ၏ နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်မှု အခြေခံကို နားလည်သင့်ဟု ကုလတရုတ် သံအမတ်ပြော ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၉ ကုလလူ့အခွင့်အရေးအကြီးအကဲ Michelle Bachelet က မြန်မာနိုင်ငံသားများအပေါ် စစ်တပ်၏ အကြမ်း
အနောက်အုပ်စုနှင့် ဆက်ဆံရေးပိုမိုတင်းမာလာပါက လက်တင်အမေရိကသို့ တပ်များစေလွှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရုရှားပြော အမေရိကန်/ အနောက်အုပ်စုမဟာမိတ်နိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေးတင်းမာလာပါက ကျူးဘားနှင့် ဗန်နီဇွဲလားနိုင် ငံများတွင် တပ်ဖြန့်ချထားမှုများပြုလုပ်ခြင်းကို စာရင်းမှဖယ်ထုတ်ထားမည်မဟုတ်ကြောင်း ထိပ်တန်းသံတမန် တစ်ဦးကပြောကြားလိုက်ပြီးနောက် ယူကရိန်းအရေး/ နေတိုးတပ်များနယ်မြေတိုးချဲ့ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရုရှား နှင့် အနောက်နိုင်ငံများ၏ အငြင်းပွားမှုမှာ ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ အမေရိကန်နှင့် ၎င်း၏မဟာမိတ်နိုင်ငံများ ရုရှားနိုင်ငံ၏ တံခါးဝတွင် ၎င်းတို့စစ်အင်အားကို လျှော့ချခြင်းမပြုလုပ်
မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏ ဝင်ငွေရလမ်းဖြစ်သော သဘာ၀ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအခွန် ပေးဆောင်မှုများကို စီးပွားရေးအရ ပိတ်ဆို့မှုများ ဆောင်ရွက် အမေရိကန်သမ္မတ Joseph R. Bidenနှင့် ပြင်သစ် သမ္မတ Emmanuel Macronထံသို့ နိုင်ငံတက ကရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၆၇ ခုက စာရေးသားပေးပို့ တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ကရင်လူမျိုးစုများဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း ၆၇ ခုက မြန်မာစစ် တပ်၏
အမေရိကန် အမျိုးသားရေး ကာကွယ်ရေး လုပ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေ NDAA ကို သမ္မတဘိုင်ဒင်လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြု၊ NUG ကို တရားဝင်ဖြစ်စေရေး အမေရိကန်ဆောင်ရွက်ချက် လွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံရမည်ဆိုသော ပြဋ္ဌာန်းချက်ပါဝင် ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ လာမည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၇၇၀ ဘတ်ဂျက် အသုံးပြုမည့် အမေရိကန် အမျိုးသား
မိုးခေါင်ရေရှား၍ ရှေးထုံးစံနည်းအရ ဧရာမအမျိုးသား ရွှေပန်းပုံသဏ္ဍန်ဖြင့် ၄၅ ဒီဂရီ ချိန်ရွယ်ကာ မိုးနတ်သမီးထံ ထိုင်းလူမျိုးတို့ရဲ့အချက်ပေးမိုးခေါ်နည်း ( ဗဟုသုတအဖြစ်သာ ) မိုးရာသီမှာ မိုးခေါင်ရေရှား ပြဿနာဖြစ်ပေါ်ပြီး လယ်တွေ ပတ်ကြားအက်တာမျိုး ၊ရေတွင်း ရေကန်တွေ ခမ်းခြောက်တာမျိုး ရင်ဆိုင်ကြရပြီ ဆိုရင် တောင်သူလယ်သမား ဦးကြီးများအတွက် အခက်တွေ့ကြရသလို ပူအိုက်လွန်းတဲ့ ရာသီဥတုကို မည်သူမျှ